Qubanaha Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Qubanaha'
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan April 27, 2017 (VIDEO)
Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaas oo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Mareykanka oo sheegay in la joojinayo qab qabashada Somalida sharci darrada ku joogta dalkaasi, oo muddooyinkii ugu dambeysay laga soo qab qabanayay guryahooda iyo goobahooda shaqo. Kongarees-ka dalka Maraykanka oo ka soo horjeestay in la joojiyo …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan March 09, 2017 (VIDEO)
March 09, 2017 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaas oo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Xaalada Abaaraha ka jira dalka Soomaaliya oo ka sii daraya, iyo xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo booqday xeryo ay ku jiraan dadka abaartu saameysay. Muxuu amarka cusub ee uu soo …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan March 02, 2017 (VIDEO)
March 02, 2017 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaas oo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Maraykanka Axmed Ciise Cawad oo ka hadlay xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya iyo isbedelada Cusub. Nolosha malaayiin Soomaali ah oo halis ugu Jira xaalad daran, kadib …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 10-Feb-2017 (VIDEO)
February 10, 2017 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaas oo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Warbixin Xiiso leh oo laga diyaariyay, Doorashadii xamaasada badnayd ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, iyo guushii uu gaaray musharax Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shacabka Soomaaliyeed ayaa si weyn u …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 05-jan-2017 (VIDEO)
January 05, 2017 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaas oo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Warbixin Xiiso leh oo ku saabsan isbadalka la Filayo Sanadka 2017 uu ka dhaco dalka Soomaaliya, Ilhaan Cumar oo Noqotay Qofkii ugu horeeyay ee lagu dhaariyey Kitaabka Qur’aanka ah, Dad wayne badan …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 30-Dec-2016 (VIDEO)
December 30, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Dalalka Maraykanka iyo Ingariiska oo u digay, musharaxiinta Somaalida ah ee haysta dhalashada dalalkooda inay ka fogaadaan musuq-maasuqa iyo carqaladaynta doorashooyinka dalka Soomaaliya. Haweeneey Soomaaliyeed oo ka sheekaysay takoorka lagu hayo dadka …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 08-Dec-2016 (VIDEO)
December 08, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya Wiilkii Soomaaliga ahaa ee jamacadii uu dhiganayay ku weeraray dad arday iyo macalimiin isugu jira gaari uu watay, isagoona markii danbe la dilay. Doorashada Aqalka …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 01-Dec-2016 (VIDEO)
December 01, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Baaritaan xoogan oo lagu wado Wiilkii Soomaaliga ahaa Cabdirisaaq Cali Cartan ee Habeenkii Isniinta Weerarka ka gaystay Jaamcada Gobolka Soomaalida ay ku badanyihiin ee Ohio iyo cidii uu xiriirka la lahaa. Mawduucayada …
DAAWO: Barnaamijka Qubanaha ee Isbuucan 30-09-2016 (VIDEO)
September 30, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Dib u dhaca ku yimid doorashada dalka Soomaaliya iyo wel-welka beesha caalamka ay ka qabto sida ay wax ku socdaan iyo Buurta Daalo oo ku taala gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya oo noqday …
Waraysigii Madaxwynaha Uga Hadlay Gooni Isutaaga Somaliland iyo Qodobo Kale (VIDEO)
September 08, 2016 – Barnaamijka Qubanaha ee ka baxa laanta Afka Soomaaliga ee VOA-da, kaasoo isbuucaan lagu soo qaatey mowduucyo ay kamid yihiin. Waraysi lala yeeshay Madaxwaynaha dalka Soomaaliya mudane, Xasan sheekh Maxamuud oo ka hadlay Barnaamij uu dhowaan ka qayb galay magaalada Muqdisho iyo Aragtida Dawlada Soomaaliya ee ku aadan maamulka Somaliland. Dalka Nigeria Dilka …